'I-Witcher: I-Nightmare ye-Wolf' i-Debuts ejabulisayo yokuqala ye-trailer!
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo 'I-Witcher: I-Nightmare ye-Wolf' i-Debuts ejabulisayo yokuqala ye-trailer!
Izindaba Zokuzijabulisa EzesabekayoAma-movie ama-HorrorI-Netflix (i-movie)I-trailer (i-movie)
Umthakathi: I-Nightmare ye-Wolf kulindeleke ukuthi iqale ukukhonjiswa kuNetflix ngo-Agasti 23, 2021, futhi umsakazi usanda kulahla i-trailer egcwele esibala izinsuku!
Amazwibela efilimu e-animated afundeka kanjena:
Umhlaba we-The Witcher uyanda kule ndaba yemvelaphi ye-anime: Ngaphambi kukaGeralt, kwakukhona umeluleki wakhe uVesemir - umthakathi osemusha owayephunyula impilo yobumpofu ukuze abulale izilo ngemali. Kepha lapho i-monster entsha engajwayelekile iqala ukwesabisa umbuso ogcwele ezepolitiki, uVesemir uzithola esesigabeni esesabekayo esimphoqa ukuthi abhekane namademoni esikhathi esidlule.
Ngaphezu kwe-trailer, sinohlu lwabalingisi oluqinisekisiwe kusuka umnqamulajuqu okubandakanya uTheo James (Umhlukanisi i-franchise) njengoVesemir, uLara Pulver (I-Alienist: Ingelosi Yobumnyama), UGraham McTavish (Castlevania), noMary McDonnell (Battlestar Galactica).
Umthakathi: I-Nightmare ye-Wolf ingenye yamaphrojekthi amabili wokuqedwa kusuka The Witcher uchungechunge oludlala noHenry Cavill olumenyezelwe yiNetflix. Umthakathi: Umsuka Wegazi, olunye uchungechunge lwezinto ezibukhoma ezisethwe eminyakeni eyi-1200 ngaphambi kokuba izehlakalo zochungechunge olukhulu luzolandisa ngendaba yokwakhiwa kwesibonelo sokuqala seWitcher. UMichelle Yeoh (Ubisi lobisi) kusanda kumenyezelwa njengenye yezinkanyezi zochungechunge.
The Witcher umdali, u-Andrzej Sapkowski usebenza njengomxhumanisi kuwo wonke amaphrojekthi weNetflix asuselwa kumanoveli nasezindabeni zakhe.
Bheka leyo trailer ye Umthakathi: I-Nightmare ye-Wolf ngezansi, futhi usazise uma uzobuka lapho lehla endaweni yesikhulumi sokusakaza ngenyanga ezayo!
U-Andrzej SapkowskiUGavin McTavishULara PulverUMary McDonnellNetflixThe WitcherUmthakathi: NIghtmare of the WolfUTheo JamesWaylon Jordan
'U-Chucky' Ulingise Indima Yabasha Nababi UCharles Lee Ray
'Anansi Boys' kaNeil Gaiman ekuThuthukisweni njenge-Series e-Amazon
Dlulisa amehlo kuma-Cateories Khetha Category I-Amazon (i-movie) (7) I-Amazon (uchungechunge) (11) I-AppleTV + (5) Imisebe ye-Blu (8) Amahlaya Ahlekisayo (49) Amahlaya (13) Izinto Ezipholile Zokuthenga (5) I-Facebook (uchungechunge) (1) Izinganekwane (43) Kutholakale amavidyo (28) I-Gore (24) I-HBO (ama-movie) (6) I-HBO (uchungechunge) (7) Izincwadi zeHorror (58) Izindaba zeHorror Entertainment (10,792) Ama-movie asabisayo (325) Uchungechunge lwe-Horror (85) Ama-Horror Subgenres (10) IHulu (uchungechunge) (5) Izingxoxo (i-movie) (39) Izingxoxo (uchungechunge) (4) I-LGBTQ Horror (42) Uhlu (ama-movie) (38) Uhlu (uchungechunge) (2) Imakethe (19) I-Monster Horror (9) Ukubuyekezwa kwe-Movie (55) Ama-movie (14) Umculo (36) INetflix (i-movie) (29) INetflix (uchungechunge) (33) Okungeyona inganekwane (4) I-Paranormal (75) I-Psychological Horror (thrillers) (52) Ukubuyekezwa kochungechunge (9) Ukuqhaqhazela (i-movie) (46) Ukuqhaqhazela (uchungechunge) (15) I-Slasher (4) Okungajwayelekile futhi Okungajwayelekile (36) Ama-Movie wokusakaza (79) Uchungechunge Lokusakaza (39) Amathoyizi (2) I-trailer (i-movie) (238) I-trailer (uchungechunge) (46) Ubugebengu Bangempela (46) Imidlalo Yevidiyo (182) I-YouTube (i-movie) (3) I-YouTube (uchungechunge) (13)
INetflix Thriller 'Echoes' Isakaza uMat Bomer noMichelle ...